१३ बुँदे माग कार्यान्वयन भए गोरखाले देशको ढुकुटी भर्छ
अन्तर्वार्ता , समाज
१३ बुँदे माग कार्यान्वयन भए गोरखाले देशको ढुकुटी भर्छ कृष्णकुमार राई अर्थतन्त्रले फड्को मार्छ !
विनय ज्याेती मंगलवार, कार्तिक ५, २०७६, १५:००:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । दुई सय ४ वर्षबाट बेलायतमा सैनिकको रुपमा जान थालेका नेपाली गोरखा सैनिक केही वर्षयता संगठित भएर अधिकार प्राप्तिका निम्ती लागिपरेका छन् । संघले अंगे्रज सैनिक र गोरखा सैनिकका सेवासुविधा समान हुनुपर्ने माग उठाउँदै आएको छ । बेलायत सरकारले आफ्ना देशका सैनिकलाई राम्रो सेवा सुविधा दिने तर गोरखा सैनिकलाई कम सेवा प्रदान गर्नु नै असन्तुष्टीको मुख्य केन्द्र बनेको थियो । विं सं. २०४७ असार २७ गते औपचारीक रुपमा गोरखा भुपू सैनिक संघ(जीएइएसओ–गेसो) स्थापना गरेपछि सैनिकका मागले सार्थकता पाउन थालेको छन् ।
स्थापित संघले के काम गर्यो ? कसरी अगाडि बढ्दैछ ? कस्ता–कस्ता उपलब्धि हाँसिल गर्यो र संघमा के–के समस्या छन् ? भन्ने प्रश्न गेसोको सभापति कृष्णकुमार राईलाई सोधेका छौं । साथै गोरखा सैनिकलाई विदेश पलायन हुनेगरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । यसै विषयको पेरिफेरीमा रहेर संवाददाता विनय ज्योतीले गोरखा भुपू सैनिकका अध्यक्षसँग कुराकानी गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा तपाईँले ‘म सामाजिक न्याय प्राप्तिको युद्धको मोर्चामा छु’ भन्नुभएको छ । यसको अर्थ के हो ?
दुई सय चार बर्षका दौरानमा बेलायतले नेपाली युवाहरु जसलाइ ‘गोर्खा’ भनिन्छ – उनीहरुलाई हरेक कुरामा समानता दिन्छौं भनेर बेलायती सेनामा लगेको थियो । तर यति लामो अन्तरालसम्म पनि बेलायत सरकारले समान कामको समान ज्याला दिएको अवस्था थिएन । यसर्थमा गोरखा पनि एक प्रकारले समाज हो । सामाजिक न्याय भन्नाले – यो समाजलाई न्याय चाहिएको छ, अधिकार चाहिएको छ भन्ने हो ।
त्यसैले सम्पूर्ण गोरखाहरु आफ्नो हक हित र उनीहरुले पाउनुपर्ने अधिकारको निम्ती गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ(गेसो) अग्रपंतिमा भएर लडिरहेको छ । जसलाई नेतृत्वदायी भुमिका खेल्दै अगाडि बढिरहेको छ । मैले त्यही कुरा इंकित गर्न खोजेको हो ।
सेवासुविधाका सवालमा गोरखा सैनिक र बेलायती अंग्रेज सैनिकबीच त्यसबेला(४७ साल र सोभन्दा अघि) के–कस्ता भिन्नताहरु रहेका छन् ?
२०४७ सालभन्दा अगाडि जुन ढंगले बेलायत सरकारले गोरखा सैनिकलाई उत्पीडनमा राखेको थियो । विभेद गरेको थियो । त्यो कुरा गोरखालाई थाहा हुँदा हुँदै पनि त्यतिबेला नेपालमा संघसंस्था खोल्न नपाउने भएकाले, एकतन्त्रीय शासन भएकाले हामी संगठित हुन सकेका थिएनौं । जब ४६ सालमा बहुदलको पुनस्थापन भयो । त्यसपछि पदम बहादुर गुरुङले भूतपूर्व गोरखा संघ(गेसो) नामक संघ स्थापना गर्नुभयो । त्यसयता करिब तीन दशकदेखि गोरखाप्रतिको विभेदविरुद्ध न्यायको लडाइँमा लागिरहेका छौं ।
कस्ता कस्ता विभेदहरु भएको छन् भन्ने सवालमा म केही कुरा भनौं :
प्रथम विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध र क्षेत्रीय युद्धको समयमा बेलायती सेनाको तर्फबाट लड्दा हरेक पल्टनमा गोरखा अग्रपंतिमा हुनुपर्ने । बेलायती सरकार भित्रको आन्तरिक शक्ति बलियो बनाइदिनुपर्ने । तर, यसको सबै श्रेय बेलायती सेनालाई जाने । उतीबेला बेलायत विश्वमै शक्तिराष्ट्रका रुपमा थियो । त्यो सबै गोरखाली सेनाले संभव भएको हो । तर
– युद्धमा अग्रपंतीमा हुनुपर्ने सेवासविधा भने थोरै मात्र दिने । पल्टनबाट रिटायर्ड भैसकेपछि दिनुपर्नेमा सबैभन्दा थोरै रकम मात्र दिने ।
– हाम्रा बालबालिका, छोराछोरी बाबु आर्मीमा हुँदा बेलायतमै हुर्किएका हुन्छन् । तर रिटायर्ड हुनेबित्तिकै उनीहरु पनि बाबुसँगै फर्किनुपर्छ । नेपाल र बेलायतको वातावरण फरक भएकोले उनीहरु अर्धशिक्षित जस्तो भएर भौतारिनु परेका अवस्था छ ।
–प्रथम, दोस्रो विश्वयुद्ध लगायत विभिन्न क्षेत्रीय युद्धहरुमा जो घाइते भए जो हराए जसले पेन्सन पाएको छैन उसले समान क्षतीपूर्ती पाउनुपर्ने र पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्नेमा सो काम भएको थिएन । समस्याहरु यस्तै थिए ।
संगठन हुनुपर्ने रहेछ भनेर कसरी चेतनशील बन्नुभयो ? के ले प्रेरण गर्यो ? ४६ सालको बहुदलको पुनस्र्थापनाको प्रभाव बेलायती सैनिकमा परेको जस्तो कुरा गर्नुभयो !
हो, बास्तवमा ४६ सालको आन्दोलनपछि बहुदल प्राप्त भएपछि नै गेसो स्थापना भएको हो । जन आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनका कारण श्री ५ को सरकारले जुनसुकै किसिमको संस्था खाेल्न पाउने व्यवस्था भएपछि हाम्रो संघ खोलेको हो । त्यसपछि २०५१ सालसम्म संस्थापक पदम बहादुर गुरुङज्यूले आन्दोलन चलाउनु भएको थियो ।
संगठित स्थापना भइसकेपछि कुन–कुन कुराहरुमा परिवर्तन भए ?
– २०४७ सालबाट अहिलेसम्म भएका कामहरुमा सन् १९९७ मा युनिभर्सल पे भन्ने लागू गराइयो । यो हाम्रो पहिलो काम हो । जसले कार्यरत भूपू सैनिक दाजुभाईको सुविधा र तलबमा केही बृद्धि भयो ।
– हाम्रो आन्दोलनले झन चर्को रुप लिएपछि सन् २००० मा क्रिसमस गिफ्टको नाममा दुई सय प्रतिशत पेन्सन बृद्धि गरिदियो । त्यसपछि सात हजार चार सय ८२ नेपाली रुपैयाँ पेन्सन आउन थाल्यो ।
– दोस्रो विश्वयुद्ध लड्दाका बखतमा ज–जसले जापानसँग युद्ध गरे । जापानसँगको युद्धमा उनीहरु बन्दि भए । गोरखाली सेनासँग बन्दी हुनेमा बेलायती सेना पनि थिए । लडाईँ शान्त भैसकेपछि जापानी सेनाले उनीहरुलाई छोडिदियो र गोरखाली सेना नेपाल आए । तर, खाली हात, कुनै पति क्षतीपूर्ती नदिइ उनीहरुलाई नेपाल फर्काइयो । त्यसबेला उनीहरुले बाटोखर्च मात्र पाएका थिए । जापानले बेलायती सरकारलाई क्षतीपूर्ती दिएको तर बेलायतले गोरखा सेनालाई सो रकम दिएको थिएन । यस विषयमा हामीले २१ मे २००२ मा सम्मनीत बेलायती उच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यौं र २९ नोभेम्बर २००२ मा फैसाला दिइयो । ६ महीनाको अन्तरालमा नै हामीले मुद्दा जित्यौं । हाम्रा अग्रजहरुले १० हजार पाउण्ड पाए ।
– चौंथो उपलब्धि भनेको हामीले पेन्सनको मुद्दा हाल्यौं । निकोलस ब्ल्याक नाम गरेका अदालतको न्यायाधिसले मुद्दाको गम्भिरतालाई बुझ्दै नेपाल र बेलायतबीच गहिरो सम्बन्ध राख्ने भनेकै गोरखा सेना हो । त्यसैले यो मुद्दा बाहिर बसेर मिलाउनु भनेर अदालतबाट आदेश आयो । तर बाहिरबाट बेलायत सरकारले मिलाउन सकेन । पछि यो मुद्दा सदर भयो ।
– पाँचौ उपलब्धि भनेको, हामी सैनिक हुँदा बेलायती राजखान्दानको विश्वासनीय पात्र हुने तर सेवा निवृत्त भैसकेपछि बेलायतले हामीलाई आफ्नो देशमा राख्न नचाहने लगायत विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा हाल्यौं । जसमध्ये आवसीय भिषाको मुद्दा ३० सेप्टेम्बर २००८ मा आएर सदर भयो ।
तर सदर भएको मुुद्दाको कार्यान्वायन भएन, त्यसबेला विपक्षी दल लिवरल डेमोक्रेटिकका नेता डिक्लेटले सदनमा प्रश्न गरे, साथै गेसोको सक्रियतामा बेलायतभरी आन्दोलन पनि गर्यौं । त्यसपछि बेलायतको तल्लो सदन ‘हाउस अफ कमन्स’मा संकल्पको प्रताव दर्ता भयो र छलफल पनि भयो तर टुंगो लागेन । बेलुका भोटिङ द्वारा २१ मतले गोसोले हालेको मुद्दा सदर भयो । २७ अप्रिल २००९ मा मुद्दा हाउस अफ कमन्सबाट पारित भएको थियो । २१ मे २००९ मा बेलायत सरकारले एक नीति कार्यान्वयन गर्यो र गोरखा परिवासँगै बेलायत जान पाउने भए । (यस्ता विषयमा परिवर्तन भएका छन् ।)
तर तपाइँले भनेको कुरा पालायनवादी भएन ?
राणा शासनको समयमा शासकले गाउँगाउँमा गएर मानिसहरुलाई घोक्रेठ्याक लगाएर छानीछानी बेलायती सेनामा ल्याए । त्यतिबेला राणाको सत्ता टिकाइदिनका निम्ती हामी सेनामा जाइदिनु पर्यो । लामो समयसम्म यो प्रकृया चलेपछि बेलायत सैनिकमा जाने प्रथा संस्कारका रुपमै उदय भयो । बास्तवमा शासकहरुले जनजाति बुद्धिमान हुने भनेर जनजातिहरुलाई देशबाट लखेट्नाका लागि गोरखामा भर्ना गराएका थिए । त्यसैले बेलायतमा बस्न पाउनुपर्ने हामीलाई अधिकारस्वरुप प्राप्त हुनुपर्ने जस्तो लागेर हामीले यो बाटो अपनाएका हौँ ।
यो संघ राजनीतिक दलबाट चैँ कतिको प्रभावित छ ?
छैन, हामीले विधानमै व्यवस्था गरेका छौं । जुनसुकै राजनीतिक पार्टीमा आस्था राख्ने मानिसले पनि यो संगठनमा आवद्ध हुन सक्छन् । तर, गेसोका मञ्चमा आएर पार्टीगत र राजनीतिक कुरा गर्न भने पाइँदैन । त्यसो भन्दैमा आफू लागेको राजनीतिका पार्टीमा गएर भाषण गर्न नपाइने र त्यहाँ गएर भोट माग्न नपाइने भन्ने होइन । गेसोको कार्यक्रममा आएर चाहिँ राजनीति गर्न पाइदैन भन्ने विधान छ, त्यत्ति हो ।
तपाईँले एक कार्यक्रममा ‘राजनीतिक पार्टीभन्दा कम शक्तिसाली हामी छैनौं’ भन्नुभएको छ । यसको अर्थ के हो त ?
बेलायतभरीमा हाम्रो १३ वटा शाखा कमिटी छन् । हाम्रो केन्द्रिय कार्यालयको आह्वानमा हजारौं मानिस कार्यालयमा उपस्थित गराउन सकिन्छ । त्यो उपस्थिति भनेको कुनै पनि राजनीतिका पार्टीको भन्दा कम छैन् । यस्तो हैसियतमा पुगिसकेपछि कोही मानिसले पनि हामीलाई राजनीतिक पार्टीभन्न कम नसम्झिनु भनेर भन्न खोजेको मात्र हो ।
भुपू गोरखा सैनिक र सैनिकका सन्ततीलाई नेपाली राजनीतिमा आउन कस्ता समस्याहरु छन् ?
देशको इतिहासलाई राम्ररी हेर्ने हो भने गाेरखाहरु २ सय वर्ष पछि छौं । २ सय वर्ष अघि नेपालीहरु बेलायत नगएर देशमै बसेर केही गर्न सकेको भए आज हामी पनि राजनीतिमा हुने थियौं होला । बेलायतको सट्टा देशमै बलिदान दिने थियौं होला । तर जतिबेला नेपालको जनसंख्या तीन लाख मात्र थियो त्यसबेलाबाट नै राणहरुले हामीलाई परदेश पठाएका कारण हामी राजनीतिमा पछि परेका हौं । अहिलेसम्म अघि बढ्न नसकेका हौं ।
अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्दा राजनीति गर्ने उमेरमा झन्डा बाेकेकै हुनुपर्ने मान्यता छ । तर हामी त बेलायती सेनामा भर्ती भएका कारण झण्डा बोक्न सकेनौं । तसर्थ नेपाली राजनीतिको गलत बुझाइका कारण हामी राजनीतिमा आउन नसकेका हौं ।
अन्त्यमा, हालको परिप्रेक्षमा कस्ता समस्याहरुको समाधान खोजीरहनु भएको छ ?
अहिले हामीले एक प्रतिवेदन बनाएका छौं जसमा १३ बुँदा छन् । सो १३ बुँदामा हामीमाथि भएका दमन र हामीले पाउनुपर्ने अधिकारका विषयमा कुराहरु गरिएको छ । हामीले वार्तामा सहभागी भएर त्यो हाम्रो प्रतिवेदन लागू गराउन सफल भयौं भने नेपालले कुनै पनि राष्ट्रबाट अनुदान लिइरहनु पर्दैन । गोरखाहरुकै सहयोगले राष्ट्रिय ढिकुटीमा राम्रो सहयोग प्राप्त हुन्छ । अर्थतन्त्रले एक फड्को मार्छ ।
यसका समाधानका लागि पनि हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । छिट्टै परराष्ट्रमन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवालीसँग बसेर छलफल अगाडि बढाउने छौं ।
कुराकानीका लागि तपाईलाई धन्यवाद !
तपाईँले पनि हाम्रो कुरा राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो । जनतापाटी डट कमलाई पनि धेरै धरै धन्यवाद ।
राजपाको आन्तरिक समस्याले एकीकरणमा ढिलाई – शिवजी यादव राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) र समाजवादी पार्टी नेपालबीच एकताको चर्चा अहिले सेलाएको छ । पार्टी एकीकरणबारे मुख्य एजेण्डा बनाएर राजपा अध्यक्ष मण्डलको बैठकसमेत बस्यो । राजपाले न एकीकरणको निश्कर्ष निकाल्न सक्यो, न हुदैन भन्न सक्यो । तर दुवै पार्टी एकीकरणका लागि निरन्तर अनौपचारिक छलफलमा छन् । शुक्रवार, आश्विन १०, २०७६, १३:२०:००
समताको समिक्षा – सामाजिक विकृति विरुद्ध आवेग सामाजिक कार्यहरुमा निरन्तर सकृय कवि तथा गजलकार तुलसी प्रसाद भट्टराईले आफ्नो दुई कृति भर्खरै बजारमा ल्याएका छन् । समाजिक विसंगती र कुरीतिलाई पेचिलो व्यङ्ग्यमा ढालिएको शस्त्रीय प्रमाणसहितको सुरम्य रचना उनका कृतिहरु ‘गजल मञ्जरी’ र ‘समता’मा पढ्न पाईन्छ । ‘गजल मञ्जरी’ गजल संग्रह हो भने ‘समता’ खण्डकाव्य हो । बुधवार, आश्विन ८, २०७६, १३:१९:००